February 2018 | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန် မြန်မာစားသုံးသူများသမဂ္ဂ အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း Policy Alternatives Research Institute (PARI) အဖွဲ့အား လက်ခံတေ့ွဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Policy Alternatives Research Institute (PARI) အဖွဲ့အား လက်ခံ တေ့ွဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်လင်းThe World Bank မှ Ms.Nagavalli Annamalai ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတေ့ွဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း အာရှဒေသ ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းမွန်ရေး၊ နည်းပညာ ပြန့်ပွားမှုအဖွဲ့မှ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Akio KawaKami ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နယ်သာလန် သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Feb 19, 2018/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တောင်သူလယ်သမားနှင့် အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက် NPO Asia Environmental Technology Promotion Institute, NPO-AET (အာရှဒေသပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် နည်းပညာ ပြန့်ပွားမှုအဖွဲ့) အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်(ခ)ဦးထွန်းထွန်းဟိန် ILO Liaison Officer Mr.Rory Mungover ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Feb 17, 2018/
Feb 16, 2018/
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ဘန်ကောက်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Abdelilah El Housni အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးအောင်ထွန်းခိုင် Westminster Foundation For Democracy (WFD) မှ UK အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mr.Lord Malcolm Bruce အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း UNAIDS Myanmar မှ Country Director ဖြစ်သူ Mr. Oussama Tawil အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Huawei Technologies Co.,Ltd အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပညာရေး မြှင့်တင်မှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်အောင် Westminster Foundation For Democracy (WFD) ၊ Mr.Neil Carmicheal (ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ (၂၀၁၀ -၂၀၁၇)၊ UK အောက်လွှတ်တော်) ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Feb 13, 2018/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကျင်းပ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်မိုးနိုင် Myanmar Machinery Manufacturing Co.,Ltd အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Feb 05, 2018/